Pedzisa 11.00pm EST Hurricane Irma Kugadziridza, Shanduko, Yambiro uye Watches
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » Pedzisa 11.00pm EST Hurricane Irma Kugadziridza, Shanduko, Yambiro uye Watches
Antigua & Barbuda Kuvhuna Nhau • Bahamas Kuputsa Nhau • Bharabhasi Kuputsa Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Cuba Kupwanya Nhau • Curacao Kuputsa Nhau • Haiti Kuputsa Nhau • chengetedzo • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • UK Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau
7 min kuverenga
Iyo Hurricane Yambiro yeUS neBritish Virgin Islands yakamiswa zvinoenderana neNWS National Hurricane Center Miami yakaburitswa na 11.00 pm EST.
Sekureva kweNational Hurricane Center, Hurricane Irma inenge mamaira 85 NNW yeSan Juan Puerto Rico ichiponesa San Juan chikamu chikuru. Zviri 315 mamaira ESE eGrand Turk Islands. Mhepo yakanyanya ikozvino 185 mph.
Chamupupuri Yambiro iri kushanda ye…
* Puerto Rico, Vieques, uye Culebra
* Dominican Republic kubva kuCabo Engano kuenda kumuganhu wekuchamhembe neHaiti
* Haiti kubva kumuganhu wekuchamhembe neDominican Republic kusvika Le Mole St. Nicholas
* Maodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweBahamas uye maTurks neCaicos Islands
Iyo Hurricane Watch iri kushanda ye
* Cuba kubva kudunhu reMatanzas kumabvazuva kuenda kudunhu reGuantanamo
Yambiro kuTropiki Dutu iri kuita kuti…
* Dominican Republic kubva kumaodzanyemba kweCabo Engano kumadokero kumuganhu wekumaodzanyemba neHaiti
* Haiti kubva kumaodzanyemba kweLe Mole St. Nicholas kuenda kuPort-Au-Prince
* Cuba matunhu eGuantanamo, Holguin, uye Las Tunas
Pa1100 PM EST (0300 UTC), iyo nzvimbo yeHurricane Irma yaive padhuze nepakati 19.4 North, longitude 66.8 West. Irma iri kufamba ichienda kumadokero-kuchamhembe kwakadziva kumadokero padyo ne16 mph (26 km / h), uye kufamba uku kwese kunotarisirwa kuenderera kwemazuva mashoma anotevera. Panzvimbo yekufungidzira, iyo yakakomba njodzi yeIrma ichaenderera ichipfuura kuchamhembe kwePuerto Rico manheru ano, ichipfuura padyo kana kuchamhembe chete kwemahombekombe eHispaniola China, uye ive padhuze neTurks neCaicos nekumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweBahamas neChina manheru.
Mhepo dzakasimba dzakasimba dziri padyo ne185 mph (295 km / h) ine mhepo dzakakwirira. Irma chikamu chechishanu dutu paSaffir-Simpson Hurricane Wind Scale. Dzimwe shanduko mukusimba dzinogona kuitika mukati mezuva rinotevera kana maviri, asi Irma inofungidzirwa kuramba iri ine simba chikamu chechina kana chechishanu dutu mukati memazuva mashoma anotevera.
Dutu remhepo dzechamupupuri dzinotambanudzira kunze kusvika kumamaira makumi mashanu (50 km) kubva pakati uye mhepo dzinopisa-dutu-remhepo dzinotambanuka kunze kusvika kumakiromita 85 (185 km).
Iyo inofungidzirwa padiki yepakati kumanikidza ndeye 916 mb (27.05 inches).
DZINENGE DZINOTAMBUDZA NYIKA
Dutu SURGE: Kubatanidzwa kwehupenyu hunotyisidzira hwemhepo nemafungu makuru ekupwanya kuchasimudza huwandu hwemvura PAMUSORO PENYAYA YEMAHARA NEMAVHANGI nemari inotevera mukati medanho rekuyambira yedutu padyo uye kuchamhembe kwenzvimbo yeIrma. Pedyo nemhenderekedzo yegungwa, kusimuka kuchaperekedzwa nemafungu makuru uye anoparadza.
Turks neCaicos Islands… 15 kusvika 20 ftSoutheastern uye nechepakati Bahamas… 15 kusvika 20 ft
Maodzanyemba kwakadziva kumabvazuva uye pakati Bahamas… 15 kusvika 20 ft
Kumaodzanyemba kwemahombekombe eDominican Republic… 3 kusvika 5 ft
Kuchamhembe kwemahombekombe eHaiti uye Gulf yeGonave… 1 kusvika 3 ft
Kumaodzanyemba kwemahombekombe eCuba munzvimbo yekuyambira… 5 kusvika 10 ft
Iko kusanganiswa kwehupenyu hunotyisidzira hupenyu hwemhepo uye mafungu anokonzeresa nzvimbo dzakaomarara padyo nemahombekombe kuti dzifashwe nemvura dzinokwira dzichipinda mukati kubva kumahombekombe. Mvura inotarisirwa kusvika kune anotevera HEIGHTS PASI PASI kana kukwira kwepamusoro kuchiitika panguva yemafungu makuru…
Kumaodzanyemba kwemahombekombe ePuerto Rico… 2 kusvika 4 ft
Maodzanyemba ekumaodzanyemba kwePuerto Rico… 1 kusvika 3 ft
Mazinga emvura muUS neBritish Virgin Islands anodzikira zvishoma nezvishoma manheru ano uye kutanga kweChina.
Mvura yakadzika kwazvo ichaitika pamwe chete nemahombekombe munzvimbo dzemhepo dzepanyika, uko kusimuka kuchaperekedzwa nemafungu makuru uye anoparadza. Mafashama ane chekuita nekufema anoenderana neyakaenzana nguva yekuwedzera uye kutenderera, uye inogona kusiyanisa zvakanyanya pamusoro penzvimbo pfupi. Kuti uwane ruzivo rwakananga kunharaunda yako, ndapota ona zvigadzirwa zvakapihwa neako emuno National Weather Service hofisi yekufanotaura.
Mhepo: Tropical Dutu uye Hurricane mamiriro ezvinhu anoenderera mberi achipararira kumadokero pamusoro pezvikamu zvePuerto Rico manheru ano. Dutu remhepo rinotarisirwa kutanga mukati meyambiro yedutu muDominican Republic neHaiti kutanga kweChina, nemamiriro ekunze echando anotanga gare gare manheru ano. Dutu remhepo rinotarisirwa kutanga munzvimbo yekuyambira kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweBahamas neTurks neCaicos Islands panopera zuva reChina nemamiriro ekudutu emvura panotanga China. Aya mamiriro achapararira muCentral Bahamas neChina manheru kana kutanga kweChishanu.
Dutu remhepo uye mamiriro ekunze enzvimbo dzinopisa anogona kuitika mukati mekutarisa muCuba neChishanu. Dutu remhepo inopisa inotarisirwa kutanga mukati meyambiro munzvimbo yeCuba China manheru.
RAINFALL: Irma inotarisirwa kuburitsa inotevera mvura inoungana kusvika Mugovera:
Northern Leeward Islands… Yakawedzera 1 kusvika 3 inches. Dutu yakazara masendimita masere kusvika gumi nemaviri, yakasarudzika makumi maviri.
Maodzanyemba akadziva kumabvazuva kwePuerto Rico neBritish neUS Virgin Islands… 6 kusvika ku12 inches, yakasarudzika 20 inches. Maodzanyemba akadziva kumadokero kwePuerto Rico… 3 kusvika ku6 inches, yakasarudzika gumi inches.
Maodzanyemba eLeeward Islands, uye Saint Croix… 2 kusvika ku 4 inches.
Maodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweBahamas, Central Bahamas, uye maTurkey neCaicos… masendimita masere kusvika gumi nemaviri, akasarudzika makumi maviri.
Northern Dominican Republic nekuchamhembe kweHaiti… 4 kusvika 10 inches, yakasarudzika 15 inches.
Eastern neCentral Cuba… 4 kusvika ku10 inches, yakasarudzika 15 inches.
Maodzanyemba akadziva kumadokero kweHaiti… 1 kusvika ku4 inches.
Munzvimbo dzese kunaya kwemvura iyi kunogona kukonzera mafashama anokuvadza hupenyu uye nekudonha kwemadhaka.
SURF: Makomba anogadzirwa neIrma anokanganisa kuchamhembe kweLeeward Islands, Puerto Rico, Virgin Islands, maodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweBahamas, maTurks neCaicos Islands, kuchamhembe kwegungwa reDominican.
Republic, uye zvikamu zvemaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwemahombekombe eUnited States mukati memazuva anoverengeka anotevera. Aya mapundu anogona kukonzera kufa-kutyisidzira hupenyu uye kubvarura mamiriro azvino. Ndokumbira utarise zvigadzirwa kubva kune yako yemunharaunda mamiriro hofisi.